Puntland oo 26 maxbuus oo Al-Shabaab ah ku wareejisay dowlada federaalka Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland oo 26 maxbuus oo Al-Shabaab ah ku wareejisay dowlada federaalka Soomaaliya
October 5, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Maxaabiis Al-Shabaab ah oo ku jira xabsiga magaalada Garoowe. [Sawirka: Puntland Mirror]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 26 maxaabiis Al-Shabaab ah oo ku jiray xabsiga Garoowe ayaa loo wareejiyay Muqdisho maanta oo Arbaco ah, sida uu sheegay sargaal.
Sargaal dhanka amaanka ah, oo codsaday in aan magaciisa la sheegin ayaa warsidaha Puntland Mirror u sheegay in wareejintu ay dhacday.
Sida uu sargaalka sheegay, dagaalyahanada la wareejiyay ayaa dhawaan lagu xukumay dhaqan-celin sababtoo ah waxay ahaayeen caruur yar yar.
Ku dhawaad 97 dagaalyahan oo Al-Shabaab ah ayaa la soo qabtay intii uu socday dagaalkii u dhaxeeyay ciidamada dowlada Puntland iyo kooxda Al-Shabaab oo bishii Maarso ee sanadkan ka dhacay gobolada Mudug iyo Nugaal.
Waa markii kowaad oo ay dowlada Puntland maxaabiis ku wareejiso dowlada federaalka Soomaaliya ee Muqdsho.
Bartamihii bishii Juune, maxkamada ciidamada dowlada Puntland ayaa 43 dagaalyaan oo Al-Shabaab ah oo ka weyn 18-sanno ku xukuntay dil toogasho ah.
Bishii lasoo dhaafay ee September, maxkamada ciidamada ayaa sidoo kale ku xukuntay 28 Al-Shabaab ah xabsi u dhaxeeya 15 ilaa iyo 20-sanno.
Baydhabo-(Puntland Mirror) Shirka amniga qaranka ayaa maanta oo Isniin ah ka furmay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Masuuliyiinta sare ee Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayaa ka qeybgalay shirka. Shirku inta uu socdo [...]